संसदीय समितिमा ४ घण्टासम्म फोहोरबारे विवादः उम्किन खोजे मेयरदेखि मन्त्री « Bagmati Samachar
संसदीय समितिमा ४ घण्टासम्म फोहोरबारे विवादः उम्किन खोजे मेयरदेखि मन्त्री
५ आश्विन २०७६, आईतवार १४:३७
५ असोज । काठमाडौं । आइतबार ४ घण्टासम्म नुवाकोटको सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापनबारे संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा चर्काचर्की बहस चल्यो । समितिले सरोकारवाला स्थानीयवासी, आन्दोलन समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, संघीय सांसद, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहसचिव, सहरी विकास सचिव र मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईदेखि काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसम्मलाई डाकेको थियो ।
नुवाकोटका स्थानीयले सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन नभई बञ्चरे डाँडामा फाहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने भएपछि समितिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि छलफल डाकेको थियो ।
नुवाकोटको सिसडोलको फोहोरले पारेको समस्याको समाधानबारे छलफल थियो । तर बैठकमा सहभागी महानगरपालिकाका मेयरदेखि मन्त्री सम्मले फोहोर ब्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुराको आफूले जिम्मेवारी लिन चाहनेन् ।
विकास तथा प्रविधि समितिले गत भदौं २३ गते नुवाकोटको सिस्डोलमा गएर त्यहाँको फोहोरको अवस्थाबारेमा अवलोकन समेत गरेको थियो ।
समितिको तर्फबाट अवलोकन गर्दा फोहोरले मान्छे बस्ने अवस्था नरहेको, मरेका जनावरका कुहिएका शरिर, पूरै बस्ति फाहोर रहेको पाइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले समितिमा बताइन् । सभापति खड्काले समितिको बैठकमा सुरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोल्ने समय दिएकी थिइन् । उनीहरुले आफ्ना गुनासा सुनाए तर पछि बोल्ने जिम्मेवारी पाएका शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, काठमाडौं महनागरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नागरिक लगानी कोषका पदाधिकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिए । उनले नुवाकोटको सिसडोलवासीलाई परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिइन् । बैठकको अन्त्यमा सभापतिले यसबारेमा स्पष्ट हुन माथिल्लो तहमा पुन बैठक राख्ने बताएर बैठक टुङ्ग्याइन् ।
अधिकार सम्पन्न विकास समिति बनाउन मागः बैठकमा कसले के भने
हितबहादुर तामाङः सांसद
त्यहाँ सामान्य खालको समस्या छैन । नेपालमा जुन खालको फाहोर व्यवस्थापनको समस्या छ, यस्तो त संसारमा कहिँ पनि छैन होला । दिउँसो घाम लागेको बेला हावा चल्यो भने तीन पिप्लेसम्म गन्ध आउने अवस्था छ । त्यहाँका मान्छेलाई हामीले कसरी चित्त बुझाउने
२०६२ सालमा एउटा सम्झौता भएको थियो । स्यानटरी व्यवस्थापन सम्झौता भनेर मोटो किताबको रुपमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँको समस्यालाई पहिचान नगरेको पनि हैन, यस्तो समस्या आयो भने कसरी जाने भनेर पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको तर त्यसको कार्यान्वन किन भएन
नारायणप्रसाद खतिवडाः सांसद
२ बर्षमा गर्ने भनेको काम १४ बर्ष पर्खियौँ, अब हाम्रो धैर्यताको बाँध टुट्छ । अधिकार सम्पन्न समिति कहिले बन्छ रु नुवाकोटे फोहोरसँग बस्न नै मिल्ने हो त रु बञ्चरे डाँडाँमा फोहोर थुपार्ने मात्र कि प्रशोधन पनि गरिन्छ त्यो स्पष्ट पारियोस् ।
बद्री मैनालीः प्रदेशसभा सांसद
केशव पाण्डेः प्रदेश सांसद
बालकृष्ण आचार्यः मेयर, धुनिवेशी नगरपालिका
स्वास्थ्य केन्द्र राम्रो बनाउने, विद्यालयमा दरबन्दी दिने, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने भनिएको थियो तर सबैलाई १ करोडमा साटिएको छ । १७ सय ८१ रोपनी जग्गा अधिकरण हुँदा धादिङको जग्गा अधिग्रहण किन गरिएन । धुनीबेसी नगरपालिकाको फोहोरको १ सय मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने, हामी जनप्रतिनिधिलाई बाइपास गरेको गरेको अनुभूति भइरहेको छ । हामीलाई एम्बुलेन्स दिन्छु भनेको खै ।
मानबहादुर लामाःप्रमुख, ककनी गाउँपालिका
सिस्डोलमा सय बर्षसम्म फोहार रहन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँका जनताका पशु चौपायको स्वास्थ्य विमा गर्नुपर्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र भन्ने सोचेको तर १८ नगरपालिकाको फोहोर पठाइरहेको छ । हामीलाई बच्चालाई ललिपप जस्तो १ करोड मात्र दिइएको छ ।
घननाथ बजगाइँः वडाध्यक्ष
कोल्पु खोलाको पानीले घाउमा छोएपछि धेरै मान्छे क्यान्सर भएर मरेको अवस्था छ । फोहोरको कालो पानी कोल्पु खोलामा मिसिएको छ । त्यहाँका मान्छेहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एकदिन काठमाडौंमा फाहोर सँग बस्दा कति छि छि र दुर दुर हुन्छ, हामी त फोहोरमै बसेका छौँ । त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य विमा गरिनुपर्छ कि पर्दैन
मनोहर तिवारीः तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३
चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामीः वडाध्यक्ष
श्रीराम ढुंगानाः संघर्ष समिति संयोजक
अदृश्य शक्तिको रुपमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले सरकार चलाइरहेको छ । त्यहाँ अहिले फोहोरबाट मानव नरसंहार गर्ने काम भइरहेको छ । टुल्कु खोला, त्यहाँका स्थानीय बासीको पैतृक सम्पतिको मूल्याँकन कति, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थाका लागि विदेश घुम्न गएको खर्चको हामीले मूल्याँकन गर्न पाउनुपर्छ । सबैभरी पेलेर तह लगाएर जाने कुराको हामी विरोध गर्छौ ।
त्यहाँका मानिसको भविष्य के हुने, हिजोको सम्झौता कसले कार्यान्वयन गर्ने, फोहोर मैलाका गिरोह, लगानी बोर्ड त्यो क्षेत्रमा कति बर्षसम्मका लागि जाने, कोल्पु खोलामा हिजोको जस्तो पानी कहिले बगाउने
विश्वास ढुंगानाः सिस्डोल बञ्चरेडाँडा सरोकार समिति
उत्तम पाण्डेः धुनीबेसी संघर्ष समिति
राजन केसीः आमन्त्रित सांसद
नुवाकोट र धादिङमा फोहोरमैला फाल्न नदिने भन्दा काठमाडौंका मेयरले काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका बन्द गर्छु भने के गर्ने यो सबैको साझा समस्या हो । लगानी बोर्डले काम नै नगर्नेलाई लाइसेन्स दिएपछि काठमाडौंको मेयरले के गर्ने ३७ रोपनी जग्गा लिएर इलेन्टोनिक भट्टी बनाएर दिनुहु टनका टनका फोहोर नष्ट गर्ने योजना सुरु गरौँ ।
एकअर्कालाई देखाएर उम्किए मन्त्रीदेखि मेयरः
उनले देश संघीयतामा गएपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई गएको बताए । उनले भने यो केन्द्रीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । केही विशेष क्षेत्र काठमाडौं, जनकपुर, बिराटनगरमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संघले कति गर्ने, प्रदेश स्थानीय तहले कति गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वान डोर सिस्टमबाट जानुपर्नेमा जोड दिए ।
फोहार व्यवस्थापन गरेर पनि गाली खाँएः विद्यासुन्दर शाक्य
उनले भने ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ जिल्लाको फोहोरको व्यवस्थापन गरेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहको फाहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । यो काम गरेर आफूले गाली पनि खाइररहेको छु, तैपनि आफूलाई गौरव पनि लाग्छ ।’
सरोकारवाला निकायले आफूले जिम्मेवारी नलिएपछि नुवाकोट क्षेत्र नं. १ का सांसद हितबहादुर तामाङले आक्रोस पोखे । उनले भने ‘फोहोर कसले हेर्ने रु संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । निर्देशन दिँदा कुन सरकारले हेर्ने हो, त्यो निर्देशन दिनुपर्यो । दशैं आएको छ, समस्या विकराल भएको छ । फोहोरको थुप्रो लडेर बाटो अवरुद्ध भएको छ । यो काम कस्ले गर्ने हो क्षेत्राधिकार निर्धारण होस् ।
अर्का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले पनि आक्रोस पोखे । उनले भने ‘यो बैठकमा आउने तर कसैले पनि मेरो जिम्मेवारी हैन भन्छ । फोहोरमा राजनीतिमा नगर पनि भन्ने । नेपाल सरकारको मन्त्रीलाई आदेश चाहियो रे । हामीले आदेश दिने, जिम्मेवारी कस्को हो त, सबै यसरी पन्छिने
यता, बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले सिस्डोलको फोहोर व्यवस्थापन राष्टिय समस्या रहेको बताउँदै यसको समस्या समाधनका लागि स्पष्ट योजना आयो भने सहकार्य मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले अहिले पनि २ अर्ब पूर्वाधारमा अर्थमन्त्रालयले तयारी गरेको बताए ।